Ikhanya & yangoku 1 BR Condo Kufuphi noLoliwe wokuKhanya kunye nePaki
I-condo egcinwe kakuhle, jonga uphononongo!
"Eyona ndawo ilungileyo yokufumana utyelelo olumangalisayo kwi-'Twin Cities.' Unovuyo lokufikelela kuyo yonke indawo ngohambo loluntu. " ★★★★★
"Iziporo ezilula ezimbalwa zokumisa kwisikhululo seenqwelomoya kunye nomgama wokuhamba ukuya eMinnehaha falls, ipaki entle." ★★★★★
"Ikhaya eliqaqambileyo, elonwabileyo, elikufutshane nedolophu ye-MSP kwindawo ekhuselekileyo. Akukho TV, ngoko hamba uhlole!!" ★★★★★
Intsha ku-ABNB kwaye awukwazi ukubhukisha ngoko nangoko? Nceda uthumele umbuzo uzazise. Ndiyathanda ukwamkela iindwendwe ezintsha!
Enye yezona zinto zibalaseleyo kukuba kufutshane nesikhululo sikaloliwe se-50th street light. Kukho izindlu zekofu zasekhaya, iindawo ezithengisa utywala, kunye nezinye iindawo ezishushu kanye ngaphandle komzila kaloliwe okhanyayo. Ikwalungile ukuba usedolophini kwikonsathi okanye umnyhadala wezemidlalo kuba akufuneki ube nexhala malunga nokupaka okanye ukugcwala kwabantu konke.
Indawo yam yamkelekile kakhulu. Iqaqambile, ilula, kwaye yanamhlanje-ikhitshi elikhulu elinayo yonke into oyifunayo ukwenza ukutya ekhaya ukuba ufuna ukonga imali. Ikofu, iti, kunye ne-oatmeal zinikezelwa kusasa. Zincede ngayo yonke into efrijini!
Kwakhona, ukuba uyakonwabela ukupheka, ndineziqholo, ioyile, iicondiments onokuzisebenzisa, ke konke okufuneka ukwenze kukuthenga izinto ezisisiseko ezimbalwa, kwaye ezinye zibonelelwa ngekhitshi lam! Yindawo yokuphumla kwabo bathanda ukwenza ukutya ngaphambi kokuba baphume.
Uyakonwabela uxinzelelo lwamanzi olumangalisayo kwishawa kunye nebhedi epholileyo. Nceda uqaphele ukuba esi sithuba AKUKHO TV. Ukuba ungathanda iTV, nceda ubuze malunga nolunye uluhlu lwam kwesi sakhiwo.
Indawo yam ikufutshane nesixeko (umzila kaloliwe olula kumgama wokuhamba) kwaye ukufutshane nendalo. Ndihamba ngemizuzu eyi-7 ukuya eMinnehaha Falls kunye nendawo entle yendalo apho ukuhamba kunye neenkuni zifikeleleka ngokulula. Nangona ndikufutshane nesithuthi sikawonke-wonke isitalato esikhulu sivaliwe kwindlela yokudlula ngenxa yoko kuncinci kakhulu ukugcwala. Udonga olukhulu lwesandi lukwagcina izinto zithe cwaka kwaye zizolile.
Ndihlala ndifumaneka kwi-app okanye ngesicatshulwa ukuba unemibuzo, iinkxalabo, okanye naziphi na iimfuno zokujikeleza isixeko. Ukuba unomdla kwizinto ezinomtsalane ezithile ndingathanda ukukukhokelela kwiindawo endizithandayo. Ndicinga kwaye ndisabela kunxibelelwano lwam. Ndiyazonwabela iindwendwe ezifanayo.
Ndihlala ndifumaneka kwi-app okanye ngesicatshulwa ukuba unemibuzo, iinkxalabo, okanye naziphi na iimfuno zokujikeleza isixeko. Ukuba unomdla kwizinto ezinomtsalane ezithile ndinga…
Inombolo yomthetho: STR-396541
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Minneapolis